လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြားသည့် စာများအနက် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရ?? - Yangon Media Group
လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ထံ တိုင်ကြားသည့် စာများအနက် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ကျေနပ်မှုမရ??
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သို့ တိုင်ကြားခဲ့သည့်အထဲတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့၏ဆောင်ရွက်မှုအ ပေါ်ကျေနပ်မှုမရှိသည့် တိုင်စာမှာ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သို့ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း တိုင်ကြားစာ ၄ဝဝ ကျော်တိုင်ကြားခဲ့ပြီး၊ မြေယာနှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်ကြားစာ ၁၂၉ စောင်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မကျေနပ်၍ တိုင်ကြားသည့်စာ ၆၅ စောင်၊ တရားစီရင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားစာ ၃၆ စောင်၊ ဝန်ထမ်းရေးရာတိုင်ကြားစာ ၂၅ စောင်နှင့်မြို့ နယ်၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားစာ ၁ဝ စောင်ရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်က သိရသည်။
”တိုင်စာတွေအပေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း မြေကိစ္စကမြန်မာ နိုင်ငံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေး ပြသာနာထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာ တွေ့ ရပြီးတော့ ဒုတိယကတော့ရဲတပ် ဖွဲ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ် မ ကျေနပ်မှုတွေရှိလို့ တိုင်တာရှိတယ်။ တတိယတော့တရားရေးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်လို့တိုင်တာရှိတယ်။ ဒါတွေကို ကျွန် တော်တို့လိုက်ပြီး ဖြေရှင်းပေးနေရပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးယုလွင်အောင်ကဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အနေဖြင့် အဆိုပါတိုင် ကြားစာများနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များထံတင်ပြပြီး၊ အချို့အ ရေးကြီးကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ တိုက်ရိုက်အစီရင်ခံစာပေးပို့ပြီး အကြံပြုချက်ပေးပို့ ကြောင်း၊ အကြံပြုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဌာနများ၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းလာကြောင်း ဦးယုလွင်အောင်က ဆက်လက်ပြောသည်။
”ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ တိုင်ကြားချက်တွေမှာဆိုရင် ဘာ တွေ့ရလဲဆိုရင် ရဲစခန်းမှာတရားခံ လို့ ယူဆရတဲ့သူကို ရိုက်နှက်စစ် ဆေးတာတွေရှိတယ်လေ။ အဲ့ဒါ တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ တိုင်ကြားတာ တွေရှိတယ်။ တချို့ဟာကျတော့လည်းဟုတ်တာရှိတယ်။ တချို့ကျ မဟုတ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်မှန်တဲ့ကိစ္စတွေကို ပြည်ထဲ ရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကို အကြံပြုတဲ့အခါမှာ တာဝန်ရှိတဲ့ရဲစခန်းမှူး၊ မြို့နယ်မှူးတွေကို အရေးယူတာတွေရှိပါတယ်။ တုံ့ပြန်မှုတွေကျတော့အားကောင်းပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကိုးကန့်ဒေသ လောက်ကိုင်တွင် တိုက်ပွဲရှောင်များ ပြန်လည်နေရာချထားရန် လုံးချင်းအိမ်ရာ ၆၇၅ လုံ
တာချီလိတ်-မိုင်းဆတ်သွား ကားလမ်းပေါ်၌ ကျပ်သိန်း ၁ဝဝ တန်ဖိုးရှိ ကျွန်းသစ်ခွဲသား ၁၅ တန်ခန့် ဖမ်
ရခိုင်အရေး လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ကို ပြည်တွင်း ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်
ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တ??
ကမ္ဘာ့ဘဏ်အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ မြန်မာနိုင်ငံသို့အလုပ်မဖြစ်သည့် အစီအစဉ်ကိုသာတင